पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले किन टिका लगाएनन् ?, कारण सुनेर छक्क पर्नु हुन्छ तपाइ! -
पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले किन टिका लगाएनन् ?, कारण सुनेर छक्क पर्नु हुन्छ तपाइ!
२३ आश्विन २०७६, बिहीबार १७:३८ 285 पटक हेरिएको
पुर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यो दशैंको टिका लगाएनन् । उनले टिका नलगाएको बारेमा उनकै घरकै सदस्यहरुले जानकारी दिइसकेका छन् । उनि सत्ता चलाउने दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष हुन् । आजभन्दा ठिक १३ बर्ष अघिसम्म उनले टिका लगाउने, टिका लगाइदिने, मन्दिरमा पुजा गर्ने र रीतिरिवाज मान्नेहरुलाई उनले मार्न गुण्डाहरु खटाउँथे ।
उनको आदेशमा टिका लगाउनेहरु दैनिक २÷४ जना मारिन्थे । त्यतिबेला हरेक बिहान उनले मारेका मान्छेका हेडलाइन समाचार बन्थे । कयौं टिका लगाउनेहरु मारिए । कयौं मान्यजन मारिए । पुजारी मारिए । यो काम उनले खुलमखुल्ला १० बर्ष गरे । रेकर्डमा उनले १७ हजारलाई मारे । त्यसभन्दा अघि र अहिलेसम्म उनले भुमिगत शैलीमा उनले कतिलाई मारे, त्यसको लेखाजोखा कसैसंग छैन ।